Human: Fall Flat 1.0 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဂိမ္းမ်ား ပေဟဠိ Human: Fall Flat
Human: Fall Flat ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
အဆိုပါရယ်စရာအကောင်းဆုံး multiplayer ရူပဗေဒပဟေဠိပလက်ဖောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိ!
လူ့ခုနှစ်တွင်: သင်သူသည်ထွက်ပေါက်ကိုရှာသေးရဲ့ဘယ်မှာပဟေဠိနှင့်ပြည့်စုံလွန်ပြီးအိမ်မက်ဆန်သောနေရာများအကြောင်းကိုအိပ်မက်မက်စောင့်ရှောက်သူတစ်ဦး wobbly လူ့အဖြစ်ကစား Flat Fall ။ တိုင်း option ကိုကြိုဆိုဖြစ်ပါတယ်အဖြစ်ရှာဖွေရေးနှင့်တီထွင်ဖန်တီးမှု, သော့ခများမှာ!
parkour ၏ WOBBLY အေအာရ်တီမာစတာ
သငျသညျ, (ဖြောင့်များ၏ကြင်နာ) လမ်းလျှောက်ခုန်, ဘာမှဖမ်းပြီး, ဘာမှကိုတက်, ဘာမှမသယ်နိုင်။ အဆိုပါရွေ့လျားကျွမ်းကျင်သင့်ရဲ့ပထမဦးဆုံးကြည်နူးဖွယ်စိန်ခေါ်မှုဖြစ်လိမ့်မည်။
MIND မှ-Bende ပဟေဠိဖြေရှင်းပေး
စိန်ခေါ်မှုပဟေဠိများနှင့် Hilary အာရုံပြံ့လှငျ့အပြည့်အဝကို 10 ဖွင့်အဆင့်ဆင့် Explore ။ အသစ်သောလမ်းခရီးကြိုးစားပါနှင့်အားလုံးလျှို့ဝှက်ချက်များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိ!
မိတ်ဆွေများ, မိသားစု OR စုစုပေါင်းသူစိမ်းနှင့်အတူဆော့ကစား
မည်သည့်တာဝန်အောင်မြင်ရန်အတူတကွအလုပ်လုပ် - သို့မဟုတ်ဖြစ်နိုင်သောနဲနည်းလမ်းတစ်ဦးချင်းစီကတခြား pranking နာရီဖြုန်းနေကြတယ်။ wacky mayhem တက်သည်မှ4ကစားသမားနှင့်အတူ Play!
သင့် CHARACTER customize
သင့်ရဲ့လူ့ရီစရာမတ်မတ်များစွာအတွက်ဝတ်စားဆင်ယင်။ ဘာပဲ ... ခွေး, Ninja ကို, မင်းသမီးဖြစ်! ရောထွေးနှင့်အဆုံးမဲ့ပေါင်းစပ်နှင့်အတူကိုက်ညီမှုမရှိပါ။
စိတ်တိုးပွား: https://discordapp.com/invite/505games/ & https://discord.gg/hff/
တွစ်တာ: 505_Games & @HumanFallFlat @
Facebook မှာ: https://facebook.com/505Games/ & https://www.facebook.com/humanfallflat/
Human: Fall Flat အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Human: Fall Flat အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Human: Fall Flat အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
apppatcher စတိုး 178 450.58k
Human: Fall Flat ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Human: Fall Flat အခ်က္အလက္
ထုတ်လုပ်သူ 505 Games Srl
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://505games.com/privacy
App Name: Human: Fall Flat
File Size: 440.65MB
Release date: 2019-06-27 17:00:38
Human: Fall Flat APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ